Obama oo sheegay in Mareeykanka qayb ka ahaa howlgalkii Buula-mareer
Home Somali News Obama oo sheegay in Mareeykanka qayb ka ahaa howlgalkii Buula-mareer
Madaxweynaha dalka Mareeykanka Brack Obama, ayaa maalinimadii shalay ka dhawaajiyay in ciidamada Mareykanka qayb ka ahaayeen isku daygii fashilmay ee habeen hore Ciidamada Kumaandooska Faransiiska ka fuliyeen degmada Buula-mareer, kaasoola doonayay nin lagu soo furto lahayste Allex Dennis.
Ciidamada Faransiiska ayaa doonayay ineey soo furtaan Allex Dennis oo 2009 ay afduubeen kooxda shabaab xirirkana la leh Al-qaacida, laakiin intii uu socday howlgalka soo furashada ayaa sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday dhanka Faransiiska waxaa geeriyooday Allex Dennis, sidokale waxaa ladilay 17 kamid ah Al-shabaab.
Warqad uu Obama u diray Congress, ayaa lagu yiri: : “diyaaradaheena dagaalka ayaa si kooban u galay hawada Soomaaliya, si ay uga qayb qaataan soo badbaadinta Allex Dennis, mana jirin wax rasaas ah oo ay tureen intii uu socday howlgalka”.
Obama ayaa warqadaan udiray golaha Congress, si uu raali galin uga bixiyo go’aanka uu qaatay 24 saac ee lasoo dhaafay iyadoon lala socodsiin golaha.
Obama ayaa golaha Congress, ku sasabay in go’aankaan uu uqaatay si loo ilaaliyo amniga Mareeykanka, Obama waxa uu yiri: “Ciidamadeenu si toos ah ugama qayb qaadan howlgalka”.